Cornelius Smith Jr wuxuu ku biiray Jilayaasha Shanta maalmood ee xuska | Waxaan ka socdaa mac
Taxanaha Apple TV + taxanaha Shanta maalmood ee xuska ayaa soo dhaweynaya xiddigooda cusub, Cornelius Smith Jr. Kani wuxuu noqon doonaa taxanahan cusub ee laga soo saari doono Apple TV + waxaana diirada lagu saari doonaa cawaaqibka duufaantii Katrina. Duufaan Nooca 5aad ah oo ka dhacday Badweynta Atlantik oo sababtay in ka badan 1.800 dhimasho ah iyo $ 125.000 bilyan oo dhaawac ah bishii Ogosto 2005, gaar ahaan gudaha iyo hareeraha magaalada New Orleans.
Sida laga soo xigtay Deadline, Cornelius Smith Jr. ayaa ku biiri doona Vera Farmiga iyo Adepero Oduye taxanaha oo ay hogaaminayeen John Ridley iyo Carlton Cuse.
Waxaa qoray Ridley iyo Cuse waxay sheegaysaa tan koowaad shan maalmood cisbitaalka New Orleans kadib duufaantii Katrina dhulka ku dhacay. Markay daadadku kaceen, awooddii way kacday kuleylkiina wuu kacay, daryeel bixiyeyaasha daalan ayaa lagu qasbay inay gaaraan go'aanno nolol iyo geeri ah oo iyaga daba socday sannado. Smith wuxuu la ciyaari doonaa Dr. Bryant King, oo ah layli gudaha ku takhasusay isla markaana ka mid ah dhakhaatiirta yar ee midabka leh ee cisbitaalka, oo ku dhex jira qoto dheer dhibaatada. Farmiga wuxuu matalaa aktarka, Dr. Anna Pou, oo ah dhaqtarka heeganka ugu jira xuska markii duufaantu ku dhufatay. Oduye wuxuu ciyaaraa Karen Wynn, oo ah kalkaaliyaha caafimaad ee qeybta daryeelka degdega ah ee isbitaalka ahna madaxa guddiga anshaxa.
Tixda taxanaha ahi waxay ku salaysantahay buug aan khiyaali ahayn oo uu qoray weriye Mareykan ah Sheri Fink sanadkii 2013. Buuggu wuxuu faahfaahinayaa wixii ka dambeeyay duufaantii Katrina ee Xarunta Caafimaadka ee Memorial. Sidaas awgeed waa ballaadhinta maqaal ku guuleystay abaalmarinta Pulitzer oo ay qortay Fink laguna daabacay The New York Times. Magazine in 2009. Waqtigan xaadirka ah lama garanayo marka Shanta Maalmood ee Xusuusta lagu soo bandhigi doono adeegga qulqulka Apple. Laakiin durba way qaabeysan tahay waxaana hubin doonaa goorta taxanahan bilaaban doono waxaana halkaan u joogi doonaa inaan kuula socodsiino horumarka taxanahan sidaan kuu sheegnay. markii mashruuca oo dhan la bilaabay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » Apple TV » Cornelius Smith Jr wuxuu ku biirayaa kooxda shanta maalmood ee xuska
Haddii aad iibsato HomePod, Apple wuxuu kuu soo dirayaa mid saddex sano ka hor la sameeyay